बडीगाडका १५ विद्यालयका १०४ बिद्यार्थीहरुलाई प्रजनन् स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धि तालिम ! – ebaglung.com
२०७६ जेष्ठ २३, बिहीबार १७:३५	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
कमल पौडेल, बडीगाड २०७६ जेठ २३ । बडीगाड महिला तथा बालवालिका सशक्तिकरण केन्द्रको आयोजनामा तथा बडीगाड गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा २ दिने प्रजनन् स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । बडीगाड गाउँपालिका भित्रका १३ ओटा माध्यमिक विद्यालय मध्य ६ विद्यालयका ८/८ जना गरि ४८ जना विद्यार्थीहरुलाई भिमगिठे माविमा र ७ विद्यालयका ८/८ जना गरि ५६ जना विद्यार्थीहरुको लागी भानु मावि ग्वालीचौरमा तालिम प्रदान गरिएको थिणे ।
यसै विच भानु माविमा बुधवार भएको समापन कार्यक्रममा बडीगाड गाउँपालिका वडा नं. ५ का अध्यक्ष अर्जुन खरेलले आगामी वर्षको वजेटमा बालवालिकाको क्षेत्रमा थप कार्यक्रम गर्ने गरि वजेट व्यावस्थापन गर्नुपर्ने बताए । भानु माविका प्रधानाध्यापक केशव खरेलले सशक्तिकरण केन्द्रलाई बालवालिकाको काम गर्न विद्यालय संग जोडिनुपर्ने बताए भने पत्रकार कमल पौडेलले विद्यालयमा गठन भएका बाल क्लव, रेडक्रस, स्काउट जस्ता संस्थालाई क्रियाशील गराउनुपर्ने भन्दै त्यसको लागी गाउँपालिकाले पनि सहयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यँक्त गरे ।
कार्यक्रममा विद्यार्थीहरुको तर्फवाट विमल घर्ती र मनिषा थापाले तालिमले सकारात्मक प्रभाव पारकोको बताए । तालिमको स्वास्थ्यकर्मी निरञ्जन यादव र दिपेन्द्र केसीले सहजिकरण गरेका थिए । समापन कार्यक्रम सशक्तिकरण केन्द्रका अध्यक्ष विना थापाको अध्यक्षता तथा सचिव माया केसीको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो।
तम्घासमा जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको अधिकार बिषयक अन्तरक्रिया संपन्न !